ကောလာဟလ: Samsung ကကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းကိုတီထွင်နေသည် Androidsis
ယခုနှစ်တွင်လူများစွာ၏အံ့အားသင့်စရာအတွက်ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းများသည်ယခုအချိန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တော်တော်များများကတစ်ခုကိုဖြန့်ချိပြီးပြီ။ ဤကောလဟာလသတင်းများကြောင့်ဆိုလျှင်ဤစာရင်းတွင်နောက်ထပ်အမည်ထပ်ထည့်နိုင်သည်ဟုထင်ရသည် Samsung ကသူ့ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းကိုလည်းလုပ်မယ်.
Android တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးသည်ဈေးကွက်တွင်ကစားရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ယခုအချိန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ဆမ်ဆောင်းသည်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုအလားအလာကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည် ဒီအပိုင်းကဘာလဲ
ယုတ္တိနည်းအရလွန်ခဲ့သောနာရီများအတွင်းမီဒီယာများကပဲ့တင်ထပ်နေသည့်ကောလာဟလသာဖြစ်သည်။ မရှိပါ ဒီဖုန်း၏တည်ရှိမှုအပေါ်အတည်ပြုချက်မရှိ အခုချိန်အထိ။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်ဤကဲ့သို့သောစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်ဟုမယူဆခြင်းသည်မကောင်းပေ။
Samsung Galaxy Note9ပါ ၀ င်သည့် S-Pen သည်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကစားသည့်အခါအပါအဝငျ။ လူအများစုက၎င်းကိုဂိမ်းဖုန်းတွင် s-pen အသုံးပြုမှုကိုစမ်းသပ်ရန်ကုမ္ပဏီမှစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ အမှန်တရားကိုဝေမျှနိုင်သောသီအိုရီတစ်ခု။
ဒီဆမ်ဆောင်းဂိမ်းစက်အတွက်ထွက်လာမယ့်ရက်ကိုမသိသေးပါဘူး။ ယခုအချိန်အထိ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များကိုမည်သူမျှမထုတ်ပြန်နိုင်သေးပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤသဘောမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်ရရှိရန်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရမည်။ ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုရန်။
Samsung ကဂိမ်းစမတ်ဖုန်းတစ်ခုစတင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ သံသယမရှိဘဲ, ကုမ္ပဏီအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ပစ်လွှတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဖြစ်လိမ့်မည် ရောက်ရှိလာသောမည်သည့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုအာရုံစိုက်. သင်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖြစ်နိုင်သောဂိမ်းဖုန်းတစ်လုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » ဆမ်ဆောင်းသည်ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်နေမည်ဖြစ်သည်
Pocophone F1 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
အခု Google Assistant ကဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီ